विप्लवलाई यसरी झुक्याए प्रचण्डले ! « Ok Janata Newsportal
विप्लवलाई यसरी झुक्याए प्रचण्डले !
काठमाडौं । यतिबेला माओवादी जनयुद्ध त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष पुग्यो । त्यतिबेलाको युद्ध संघर्ष र माओवादीले चाहेको व्यवस्था के यस्तै थियो त ? समिक्षा गर्ने बेला आएको छ । माओवादीसँगै संघर्ष गरिरहेका विप्लव, वैद्य, किराँतीलगायत अहिलेपनि अर्धभूमिगत अवस्थामा छन् ।
बाबुराम र प्रचण्डले मुलुकको व्यवस्थालाई स्थायी शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने चेष्टा गरे । करिब १० वर्षे जनयुद्धको विट मारे । तत्कालीन समयमा राजा विरेन्द्रले राज्यसत्ता सम्हालेका थिए । २०५२ सालबाट माओवादीले जनयुद्धको सुत्रपात गरेको थियो । त्यहीँ बीचमा २०५८ साल जेठ १९ गते राजा विरेन्द्रको वंश नास भयो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए ।
बादल समूहसहित मन्त्री मणि थापा, गौरीशंकर चौधरीको समूह प्रचण्डसँग छलफलमा…
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि यता माओवादी द्वन्द्व चरमउत्कर्षमा थियो । २०५८ सालपछि माओवादी द्वन्द्व चर्कियो । गाउँगाउँबाट जनताको लहर उठ्यो, ज्ञानेन्द्रको कूका विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिए अन्ततः २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोडे । त्यतिबेलाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
तत्कालीन समयमा प्रचण्ड, बाबुरामसँगै वैद्य, विप्लव पनि शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । पछि वैद्य र विप्लव असन्तुष्ट भएर प्रचण्डसँग टाढिए । अहिले बाबुरामले समेत अर्को बाटो समाइसकेका छन् । यसरी हेर्दा विप्लव र वैद्यले के चाहेका थिए । अहिलेको प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ ।
वैद्य अहिले ८४ लागेका छन् । ओके जनताले वैद्यसँग प्रतिक्रिया लिँदा अहिलेसम्मको क्रान्तिले के पायो ? वैद्य भन्छन्, ‘केही पाएन, अझै परिवर्तन भएको छैन । पुनः उनै र उस्तै शासक सत्तामा गए, व्यवस्थालाई पुरानै हिसाबमा धमिल्याए ।’
विप्लव यतिबेला भूमिगत छन्, उनले अझै मानिसलाई दुःख दिइरहेका छन्, क्रान्तीको आवश्यकता भन्दै मानिस तर्साइरहेका छन् । अहिले सरकारमा नेकपाको ओली पक्ष छ, यो सरकार पनि प्रतिगमन तर्फ उन्मुख भएकोले आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डलगायतको पक्ष सडकमा उत्रिएको छ ।